Phakathi kweentaba kunye noLwandle-Combe Cottage.
ICombe Cottage- nokuba ufuna ukuphumla okugqwesileyo kunye nokuphumla kwilali yekhadi leposi kwiPaki yeSizwe, okanye ujonge ukusebenza ngakumbi, iCombe Cottage yenza ukhetho olubalaseleyo.
Imbonakalo emifutshane ye-scenic amble iya kukubona ufika kulwandle oluhle lweSilecroft- iimayile zolwandle olukhuselekileyo olunesanti eneflegi eBlue, ilungele ukukhwela i-kitesurfing, ukubheqa okanye ukuhamba nenja.
Kukho indawo yokugcina ekhuselekileyo ekhoyo kwiCombe Cottage yezixhobo zakho zangaphandle, nokuba ziibhayisekile, iikayak, iiSUPs okanye nantoni na.
Uya kufumana iibhayisekile ezimbini ezifumanekayo ukuze zisetyenziswe ziindwendwe esele zikhona, zilungele ukuvela ezantsi elunxwemeni ukuze ubambe ukutshona kwelanga okanye kwivenkile encinci ekwindawo yekharavani ukuze ufumane izinto ezimbalwa zasekhaya.
Kumgama omfutshane wokuya kwisikhululo sikaloliwe apho unokunyuka uye e-Ravenglass emva koko uye e-L'al Ratty, i-Ravenglass kunye ne-Eskdale kaloliwe omncinci wokulinganisa umphunga okusa ezintabeni.
Iminyango nje embalwa kude kwaye uya kufumana i-Miners Arms-ukutya okulungileyo, ibhiya elungileyo kunye nobubele obulungileyo bendawo kanye kwindawo yakho yomnyango.
Ngaselunxwemeni kwindawo yekharavani yasekhaya uya kufumana ivenkile encinci egcweleyo, elungele ezo zinto zemihla ngemihla - isonka, amaqanda, njl.
Living between the mountains and the sea..
Sikumizuzu emi-5 kuphela ukuya elalini, ukuba ungasifuna okanye siyafumaneka ukuze siphendule nayiphi na imibuzo onayo ngomnxeba wasekhaya okanye ngeselula. Siyathemba ukuba unokuhlala kamnandi eCombe Cottage.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Silecroft